नेयमार बार्सिलोना फर्किन आतुर! बार्सिलोनाका पूर्व सहकर्मी भन्छन्– 'पिएसजीले जति खर्चिँदैन' - Gokarna News from Nepal
नेयमार बार्सिलोना फर्किन आतुर! बार्सिलोनाका पूर्व सहकर्मी भन्छन्– ‘पिएसजीले जति खर्चिँदैन’
एजेन्सी– पेरिस सेन्ट जर्मन (पिएसजी)का ब्राजिलियन स्टार खेलाडी नेइमार आफ्नो पुरानो क्लब बार्सिलोना फर्किन चाहेको उनका पूर्व सहकर्मी मार्टिन मोन्टोयाले बताएका छन् । स्पेनिस पत्रिका फिचाजेससंगको कुराकानीमा मोन्टोयाले नेयमारको सोच बार्सिलोनमा नै र्फकने मनशाय रहेका बताएका हुन् ।
नेयमार पुन बार्सिलोनामा फर्कि “यो अवश्य अलि कठिन हुने छ, तर मलाई लाग्छ नेयमार बार्सिलोनामा फर्किन चाहिरहेका छन् ।” बार्सिलोनामा ४ वर्षसंगै बिताएका मोन्टोयाले भने,” पेरिसले जति नेयमारका लागि खर्च्यो, बार्साले खर्चिने छैन, त्यसैले उनी फर्किन कठिन छ । तर मेस्सी र स्वारेजसंग उनको बेग्लै संयोजन थियो, त्यो उनलाई पनि थाहा छ ।”
नेयमार पुन बार्सिलोनमा पुन बार्सिलोनामा फर्किए पनि बार्सिलोनाले पेरिस सेन्ट जर्मन (पिएसजी)ले जति नेयमारका लागि खर्च्यो त्यति नखर्चिने समेत बताएका छन् ।
स्पेनिस वेब साइट डेली टाइम्सले नेइमारले फेरि बार्सिलोना आउन चाहेको कुरा कोन्टिन्होलाई बताएको र कोन्टिन्होले नेइमारको कुरा कप्तान मेसीलाई भनेको खबर सार्वजनिक गरेको छ।
नेइमार अहिले आफ्नो पिएसजी जाने निर्णयमा पछुतोमा रहेको उक्त समाचारमा दाबी गरिएको छ। नेइमारले कोन्टिन्होसँग एक दिन जसरी भए पनि बालोन डी’ओर जित्न चाहेको र त्यसका लागि बार्सिलोना फर्कनेसमेत बताएको समाचारमा उल्लेख छ।
मिरर पत्रिकाको अनुसार नेयमारले बार्सिलोना क्लबमा फर्किन इच्छा देखाएको भएपनि क्लबबाट उत्साहजनक प्रतिक्रिया आएको छैन । पीएसजीमा बेकार आइएछ भनी पश्चात्ताप गर्दै ला लिगा फर्किन चाहेको विश्वास गरेको जनाएको छ ।
बार्सिलोनाबाट निस्कने पत्रिका मुन्डो डिपोर्टिभोका अनुसार, नेयमार आफ्ना सहखेलाडी एडिनसन कवानीसँगको झगडा र युवा खेलाडी किलियन एम्बाप्पेको उदयका कारण नेयमार पुन बार्सिलोना फर्कन चाहेका हुन् । छब्बीस वर्षीय नेयमारले बार्सिलोनाका कर्मचारीहरूसँग राम्रो सम्बन्ध कायम राखेको र एक कार्यकारी अधिकृतसँग फर्कने कुरा राखेको बुझिएको छ ।
ब्राजिली स्टार नेयमारलार्इ फ्रान्सेली क्लब पेरिस सेन्ट–जर्मेनमा अघिल्लो वर्ष कीर्तिमान रकममा भित्रिएका थिए । पिएसजीले उनलाई २ सय २२ मिलियन युरो खर्चिंदै विश्वकै सर्वाधिक महंगो खेलाडी बनाएको थियो । बार्सिलोनाका सुपरस्टार लियोनल मेस्सीको छायांमा परेकाले गत सिजन पेरिस सेन्ट जर्मन (पिएसजी) आएको बुझिएको थियो ।
यस सिजन भने नेयमारले १४ खेलमा १२ गोल गरिसकेका छन् । पिएसजीमा उनले गत सिजन ३ उपाधि जिते पनि विश्वकपमा सोचेअनुरुप नतिजा ल्याउन सकेनन् ।